Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. गणतन्त्र स्थापनाको १२ बर्ष सकिँदा पनि अर्थतन्त्रले मुहार फेर्न सकेन – Emountain TV
गणतन्त्र स्थापनाको १२ बर्ष सकिँदा पनि अर्थतन्त्रले मुहार फेर्न सकेन
काठमाडाैं, १५ जेठ । कोभिड १९ बाट मूलुक आक्रान्त रहेका छन् । नेपालका आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प रहेको अवस्थामा मलुकको आर्थिक बृद्धिदर समेत २ दशमलव ३ प्रतिशतमा आउने अनुमान समेत गरिएको छ । मूलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको १३ बर्ष लाग्यो तर यस बीचमा जनअपेक्षा अनुसार मुलुकको आर्थिक विकास हुने विश्वास तुहिएको छ । यस्तो अवस्थामा गणतान्त्रिक बजेटले मूलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तर गणतन्त्र स्थापनाको १२ बर्ष सकिँदा पनि मूलुकको अर्थतन्त्रले मुहार भने फेर्न सकेको छैन् ।
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा करीब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको छ । नेपाली जनताद्धारा चुनिएको राजनीतिक बहुमतको सरकार छ । तथापि विगतका १३ वर्षमा जनताले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको गणतन्त्रमा जनताकै समस्याको सम्बोधन सरकारले गर्न सकेको छैन् ।
सरकारले सार्वेजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७६ / ७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुणसम्म आर्थिक परिसुचकहरु सन्तोषजनक देखिएको बताएको छ । सर्वेक्षणअनुसार कोभिड १९ कै कारण विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३ दशमलव शुन्य प्रतिशतमा संकुचन हुने अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि जनाएको छ । अघिल्ला तीन बर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिद्धर निरन्तर ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा रहेकोमा यो बर्ष २ दशमलव ३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कूल गाहस्थ्र्य उत्पादन गत बर्षको तुलनामा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १ लाख २६ हजार १८ डलर पुग्ने अनुमान गरेकोछ । २०७४ ÷७५ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक बर्ष ७६ /७७ मा १६ दशमलव ६७ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ ।
घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा आर्थिक बर्ष २०७६/ ७७ मा सुधार रहेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख ८८ हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लो बर्षको तुलनामा धानबालीको क्षेत्रफल २ दशमलव २ प्रतिशतले र उत्पादन १ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशतले घटेको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ ।
विद्युतको पहुँचमा बृद्धि, सडक निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, खानेपानी, भूकम्पपछिका पुननिर्माणमा प्रगति, शिक्षा पहुँचमा बृद्धि, बैक तथा बीमा पहुँचमा उल्लेख्य सुधार लगायतका कार्यले गति लिएको छ । यति हुदाँहुदै पनि नेपालमा उद्योग तथा कृषिमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नभएका कारण ४५ लाख बढी नेपाली युवा विदेशमा कामको लागि भौतारिन बाध्य भएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी तथा जनताले बलिदान दिएर संयुक्त प्रयासबाट भएको जनआन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १२ बर्ष वित्यो । राजतन्त्र हटाएर मुलुकमा जनताको नैसर्गिक अधिकार, जीवनस्तरमा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरयुक्त शिक्षालगायत अन्य आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्न जनताले अझै महशुस गर्न सकेका छैनन् ।